Ciidamada Booliska Puntland oo laba wiil ku dilay Magaalada Boosaaso – AfmoNews
Ciidamada Booliska Puntland oo laba wiil ku dilay Magaalada Boosaaso
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari Ciidamada ammaanka Magaaladaasi, ayaa toogtay laba dhalinyaro ahaa oo ka mid ahaa dhalinta Magaalada Boosaaso.
Falkaan dilka ah ayaa yimid, kadib markii dhalinyaro badan ay ku dagaalameen Magaalada Boosaaso, iyaga oo u dagaalamaya qaab laba xaafadood ah, waxaana arrintaasi ku baxay Ciidamada Booliska.
Booliska oo kala celinta dhalinyaradaasi u adegsaday rasaasta nool nool ayaa sababtay geerida laba ka mid ah dhalinyaradii xalay ku dagaalamay Xaafadaha Magaalada Boosaaso, sida ay xaqiijiyeen ehelada Marxuumiinta dhintay.
Sidoo kale Ciidamada Booliska ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen tiro dhalinyaro kale ah, kuwaasi oo loo soo xiray rabshadihii xalay ka dhacay Magaalada Boosaaso, waxaana hadda ay ku jiraan dhalinyaradaasi Saldhiga Magaalada Boosaaso.
Booliska & ehelada dadka dhintay ayaanan wali dhexmarin wada hadal ku saabsan dilka loo gaystay labadaasi wiil dhalinyarada ahaa, inkastoo falka uu ahaa mid aan ku talo gal aheyn oo Booliska rasaasta ay ku kala celinayeen dhalinyarada sida goobjoogayaasha ay ku waramayaan.
Ammaanka Magaalada Boosaaso ayaa wuxuu yahay mid hagaagsan, balse xilliyada qaar ay ka dhacaan falal lidi ku ah dhanka ammaanka oo ay gaystaan Daacish & Shabaab.